Chivabvu dombo rekuzvarwa - emerald yeTaurus - Nyowani yekuvandudza 2021
Emerald ndiro dombo rekuzvarwa raMay maererano nezvose zvekare uye zvemazita ezvinyorwa zve may may dombo. Dombo rekuzvarwa raTaurus neGemini yezvishongo semhete kana chishongo.
Zvinorevei kuti dombo rekuzvarwa rinorevei?
Dombo rekuzvarwa idombo rinosanganiswa nemwedzi wekuzvarwa waMay: Emerald. Icho chiratidzo chekuzvarwa patsva, chinofungidzirwa kupa muridzi kufanoona, rombo rakanaka, uye hudiki.
Emerald ibwe rinokosha uye zvakasiyana-siyana zvemaminerari beryl ane ruvara rwegirinhi nekutsvaga huwandu hwechromium uye dzimwe nguva vanadium. Beryl ane hurema hwe7.5-8. Emerald inoonekwa sedombo rekuzvarwa raNdira.
Chii chinonzi May birthstone color?
Dombo rekuzvarwa raMay rinowanikwa kupi?
Chii chinonzi May birthstone jewelry?
Ndekupi kwaungawana May dombo rekuzvarwa?
Ndezvipi zviratidzo zveZodhiac zveMay mabwe ekuberekwa?
Emerald, dombo rekuzvarwa raMay, rinotakura vapfumi girinhi Ruvara rweChirimo uye runoburitsa yakajeka yakajeka toni.
Emerald ndeimwe yematombo anokosha. Inocherwa muSouth America: Colombia, Brazil. Dombo reMay rinogona kuwanikwa mu Africa. Zambia sosi huru, uye zvimbambaira zvinozivikanwa nekugadzira maemeralds ayo ari bhuruu girini uye akasviba nezwi. Pakistan neAfghanistan varimi vakakosha zvakare.
Isu tinotengesa may mabwe ekuberekwa mhete, zvishongo, mhete, mitsipa nezvimwe.
Emerald zvishongo zvinopenya zvakapfuma uye zvine hue hue iyo inokosheswa nekuda kwayo inopenya green ruvara, kazhinji inofarirwa neumambo kupfeka kwezviitiko zvakakosha.
Pane zvakanaka Emerald inotengeswa muchitoro chedu
Emerald, dombo rekuzvarwa raMay, raive rimwe rematombo aidiwa naCleopatra. Yakagara ichibatanidzwa nekubereka, kuzvarwa patsva, uye nerudo. VaRoma vekare vakasvika pakutsaurira dombo iri kuna Venus, mwarikadzi werudo uye runako. Nhasi, zvinofungidzirwa kuti emeralds anoreva huchenjeri, kukura, uye moyo murefu.
Taurus uye Gemini matombo ese ari maviri May dombo rekuzvarwa
Chero zvaunenge uri Taurus neGemini. Emerald ndiro dombo kubva May 1 kusvika 31.
Dai 1 Taurus Emerald
Dai 2 Taurus Emerald
Dai 3 Taurus Emerald
Dai 4 Taurus Emerald
Dai 5 Taurus Emerald
Dai 6 Taurus Emerald
Dai 7 Taurus Emerald
Dai 8 Taurus Emerald
Dai 9 Taurus Emerald
Dai 10 Taurus Emerald
Dai 11 Taurus Emerald
Dai 12 Taurus Emerald
Dai 13 Taurus Emerald
Dai 14 Taurus Emerald
Dai 15 Taurus Emerald
Dai 16 Taurus Emerald
Dai 17 Taurus Emerald
Dai 18 Taurus Emerald
Dai 19 Taurus Emerald
Dai 20 Taurus Emerald
Dai 21 Gemini Emerald
Dai 22 Gemini Emerald
Dai 23 Gemini Emerald
Dai 24 Gemini Emerald
Dai 25 Gemini Emerald
Dai 26 Gemini Emerald
Dai 27 Gemini Emerald
Dai 28 Gemini Emerald
Dai 29 Gemini Emerald
Dai 30 Gemini Emerald
Dai 31 Gemini Emerald
Natural May dombo rekuzvarwa riri kutengeswa mune yedu gem shopu
Isu tinogadzira tsika yekuzvarwa yaMay mabwe semabatanidzwa, mhete, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.